စစ်ပွဲများ မရှိတော့ဘဲ နျူကလီးယား လက်နက်များ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း - Global Campaign for Peace Education
ဓာတ်ပုံ pexels မှတဆင့် cottonbro
“လူသားတို့သည် စစ်ကို ငြိမ်းစေရမည်၊ သို့တည်းမဟုတ် စစ်သည် လူသားတို့ကို အဆုံးတိုင်စေလိမ့်မည်။” သမ္မတ John F. Kennedy၊ အောက်တိုဘာလ 1963
“စစ်မှန်သော ပဋိပက္ခသည် အမြတ်အစွန်းနှင့် အမြတ်အစွန်းအတွက် အချင်းချင်း လှည့်ဖြား၍ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့် လူနှင့်နိုင်ငံများကို အသုံးချသော ပါဝါများကြားတွင် ရှိနေသည်…” Rafael de la Rubia၊ ဧပြီလ 2022
အယ်ဒီတာ၏ နိဒါန်း- စစ်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းရန် လက်တွေ့ကျသော လိုအပ်ချက်
အကယ်၍ ယူကရိန်း၏ ဘေးအန္တရာယ်များမှ အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများ ထွက်ပေါ်လာပါက၊ ၎င်းသည် စစ်ပွဲဖျက်သိမ်းရေး တောင်းဆိုမှုတွင် အသံတိုးလာနိုင်သည်။ ရှည်လျားသော နှုတ်ခမ်းဝန်ဆောင်မှုသည် အမျိုးမျိုးသော ပဋိပက္ခများအဆုံးသတ်ရန်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ဦးတည်သွားသော အမျိုးမျိုးသောနှင့် မကြာခဏ တသမတ်တည်းမညီသော ခြေလှမ်းများ၏ အန္တိမပန်းတိုင်အဖြစ်၊ "စစ်ပွဲအားလုံးကို အဆုံးသတ်ရန် စစ်ပွဲ" အတွက် လူကြိုက်များသော ပံ့ပိုးမှုဟု ကြွေးကြော်ထားသည့် ကြွေးကြော်သံတစ်ခုအနေဖြင့်၊ တစ်ဆယ့်ရှစ်ရာစုကတည်းက သံခင်းတမန်ခင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အသိပေးသည့် မျှော်မှန်းချက်အဖြစ်၊ ၂၁ ရာစုအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ဟိဂ်အစီအစဉ်နှင့် မကြာသေးမီက တင်ထားသော အကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူကရိန်း ကြေညာချက် Teachers College Columbia University Afghan Advocacy အဖွဲ့မှ၊ ဖျက်သိမ်းရေး၏ အယူအဆနှင့် ပန်းတိုင်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော အစွန်းအဖျားမှ လက်တွေ့ကျသော ဟောပြောချက်ဆီသို့ ရွေ့လျားနေပြီဖြစ်သည်။
United Nations သို့ သမ္မတ John F Kennedy ၏ 1963 ခုနှစ် မိန့်ခွန်းတွင် ထင်ရှားစွာ မှတ်သားထားသည့် လက်တွေ့ကျသော လိုအပ်ချက်ကို ဤမကြာသေးမီက ဆောင်းပါးတွင် Rafael de la Rubia မှ ယူကရိန်းဘေးအန္တရာယ်များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း အလေးအနက်ဖော်ပြပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအများအပြား၏ လက်ရှိဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် လူသားလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အဆုံးတိုင်စေမည့် နျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက်နှစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရှုပြီး အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သူတိုင်း လူသားတို့၏ ဆန္ဒနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်က ဖြစ်နိုင်ချေရှိလျှင် ဤစိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ ဖြစ်နိုင်ချေကို ရအောင် သင်ယူပြီး အောင်မြင်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်သလဲ။ (ဘား – ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၂၂)
By ရာဖေးလ် de la ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့
ပဋိပက္ခအတွက် မည်သူမှာ တာဝန်ရှိသနည်း။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသား မည်မျှသေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ရုရှားလူငယ် မည်မျှကို တိုက်ခိုက်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်ကို မသိရပေ။ ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူတွေ၊ ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအရိုးကျိုးမှုတွေနဲ့ ဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ထိတ်လန့်စရာတွေကို ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုရင် ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်။ ထောင်နှင့်ချီသော အဆောက်အအုံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးကာ နေအိမ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန် နေရာများ ပျက်သုဉ်းခဲ့သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော ဘဝများနှင့် ပရောဂျက်များ ပြတ်တောက်သွားသည့်အပြင် စစ်ကြောင့် ပြတ်တောက်ခဲ့သော ဆက်ဆံရေးများလည်း ပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နှင့် ဒုက္ခသည်ဦးရေသည် သန်းနှင့်ချီရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာပဲ မဆုံးပါဘူး။ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် နေထိုင်မှုစရိတ်စက မြင့်တက်လာမှုကြောင့် သန်းရာနှင့်ချီသော ထိခိုက်မှုများရှိနေပြီး နောက်ထပ် ဘီလီယံနှင့်ချီသော ထိခိုက်မှုများ ရှိနိုင်သည်။
ဤလူသားအများစုသည် ဘဝ၏အရုဏ်ဦးတွင် တစ်ခေတ်တည်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိကြပေမယ့် အသက်တိုတဲ့အထိ ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်။ သို့မဟုတ်၊ ယူကရိန်းလူငယ်များစွာကဲ့သို့ပင် စစ်တိုက်ရန် ခေါ်ခြင်းမခံရစေရန် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး နေကြသည်မှာ “… ငါက သေဖို့နဲ့ သတ်ပစ်ဖို့ ငယ်သေးတယ်…” ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့အပြင် မည်သူမျှ မလိုလားသည့် စစ်ဘေးကြောင့် ပြိုပျက်ခဲ့ရသည့် ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အမျိုးသမီးများ အများအပြားလည်း ရှိသေးသည်။
ဒီလို ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက် ဘယ်သူက တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထောက်ပြပါသလဲ။ ဒုံးပျံကို ပစ်လွှတ်ခဲ့သူလား၊ တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သူ။ လက်နက်လုပ်တဲ့သူ၊ ရောင်းတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် လှူတဲ့သူလား။ ဒုံးပျံကို ခြေရာခံဖို့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တီထွင်ခဲ့သူလား။ နှုတ်ဖြင့်ပြောသောသူသည် အသွေးကို ရောင်စေသောသူ၊ သူ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ အမုန်းပွားဖို့ ပျိုးထောင်ခဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။ တစ်ဖက်သားကို အပြစ်တင်ရန် မှားယွင်းသော တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် မှားယွင်းသော စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ပြင်ဆင်ခဲ့သူလား။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အား အပြစ်တင်သော လက်ညှိုးကို ညွှန်ပြပါလော့၊ တာဝန်ဝတ္တရား ကင်းမဲ့သော သူကို သေခြင်းမှ ဖယ်ရှားပေးသူအား ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ အခြားသူထံမှခိုးယူရန် ပုံပြင်များကို တီထွင်ခဲ့သူမှာ၊ စစ်ပွဲတွေမှာ ပထမဆုံးသေတာက အမှန်တရားပဲဆိုတာ အများအားဖြင့် သိထားပြီးသားပါ… ဒီတော့ တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေပဲလား။ ဝါဒဖြန့်မီဒီယာကြီးမှာ တာဝန်ရှိသလား။ မီဒီယာအချို့ကို ပိတ်ပြီး ဆင်ဆာလုပ်တဲ့သူတွေလား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေလား။ ပူတင်သည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ နယ်ချဲ့သမားဆန္ဒကို ချဲ့ထွင်ပြီး ပြန်လည်စတင်လိုသော အာဏာရှင်တစ်ဦးလား။ ဒါမှမဟုတ် NATO က ပိုနီးနီးကပ်ကပ်ပိတ်နေပြီး နိုင်ငံအရေအတွက် သုံးဆတိုးပြီး တိုးချဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကတိပေးတယ်။ ဒါတွေအားလုံးထဲမှာ ဘယ်သူက တာဝန်ရှိလဲ။ တစ်ခုမှ? ဒါမှမဟုတ် အနည်းငယ်ပဲလား။
ဤအရာအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းအရာကို အကိုးအကားမရှိဘဲ အပြစ်တင်နေသူများ၊ အလွယ်တကူ ဖော်ထုတ်နိုင်သော “မီဒီယာ”တရားခံများကို ညွှန်ပြသူများသည် သေခြင်းမှ အမှန်တကယ် အကျိုးအမြတ်ရရှိသူများကို ညွှန်ပြခြင်းမရှိဘဲ၊ ဤနည်းဖြင့် လုပ်ကိုင်သူများ၊ အမြင်တိုခြင်းအပြင် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေများတွင် ကြံရာပါများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ရှာဖွေပြီး ပြစ်ဒဏ်တောင်းတဲ့အခါ၊ နစ်နာသူရဲ့ အသုံးမကျတဲ့ အနစ်နာခံမှုအတွက် လျော်ကြေးပေးမလား၊ ခံရသူရဲ့ နာကျင်မှုကို လျော့ပါးစေသလား၊ ချစ်ရတဲ့သူကို အသက်ပြန်ရှင်စေမလား၊ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ထပ်တလဲလဲ မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးမှာလား။ အတူတူ? အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ နောင်တချိန်မှာ ထပ်တလဲလဲ တားဆီးနိုင်သလား။
ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် တရားမျှတမှုမဟုတ်ဘဲ လက်စားချေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော တရားမျှတမှုသည် ပြုမိသောဒုက္ခကို ပြုပြင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လူတော်တော်များများက ဖြစ်ပျက်နေတာကို မယုံနိုင်ကြပါဘူး။ သမိုင်းက နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသလိုပဲ။ ဒါမျိုး ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ခဲ့ကြပေမယ့် အခု ပဋိပက္ခတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဥရောပရဲ့ တံခါးပေါက်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒါကို ပိုနီးစပ်လာပါပြီ။ ရောင်စုံအသားအရည်ရှိ၍ အပြာရောင်မျက်လုံးများဖြင့် ဖြူစင်ခြင်းမရှိသော အဝေးမှစစ်ပွဲများတွင် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသည့် ပြည်သူများအတွက် ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။ ကလေးများသည် ခြေဗလာဖြစ်ပြီး မြိတ်ဦးထုပ်များ သို့မဟုတ် ဝက်ဝံရုပ်များ မ၀တ်ထားပေ။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုနီးကပ်လာသည်ဟု ခံစားရပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆင်နွှဲနေကြသော်လည်း၊ ဤအရာသည် ယနေ့ ဖြစ်ပျက်နေသည့် သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏ နေရာအတော်များများတွင် ယခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်သည်- အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဆူဒန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ကွန်ဂို၊ ယီမင် ဆီးရီးယား၊ ဘော်လကန်၊ အီရတ်၊ ပါလက်စတိုင်း၊ လစ်ဗျား၊ ချေချင်းညာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီကာရာဂွာ၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဗီယက်နမ်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ရဝမ်ဒါ၊ ပိုလန်၊ ဂျာမနီ သို့မဟုတ် လိုက်ဘေးရီးယား။
တကယ့်ပြဿနာမှာ စစ်မှအမြတ်ထွက်သူများ၊ စစ်-စက်မှု ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အတူ၊ ကမ္ဘာကြီး၏ သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို မျက်နှာမူကာ ၎င်းတို့၏ အာဏာနှင့် အကြင်နာကင်းမဲ့သော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းလိုသူများ၊ တည်ဆောက်ရန် နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရသော လူများစု၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဖြစ်တည်မှု။
၎င်းသည် ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံသားများကြား ပဋိပက္ခမဟုတ်ပါ၊ ဆာရဝီနှင့် မော်ရိုကို၊ ပါလက်စတိုင်းနှင့် ဂျူးများကြား သို့မဟုတ် ရှီးယိုက်နှင့် ဆွန်နစ်များကြားကထက် ပိုပါသည်။ စစ်မှန်သော ပဋိပက္ခမှာ အမြတ်အစွန်းအတွက် အချင်းချင်း အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးကိုင် ဖိနှိပ် ညှင်းပမ်းခြင်း ဖြင့် လူများနှင့် နိုင်ငံများကို အသုံးချသော အာဏာများ အကြားတွင် ဖြစ်သည်။ တကယ့်ပြဿနာမှာ စစ်ပွဲမှ အမြတ်ထွက်သူများ၊ စစ်-စက်မှု ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အတူ၊ ကမ္ဘာကြီး၏ သိမ်းယူခံခဲ့ရသော လိုအပ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်ရန် ရုန်းကန်နေရသော လူများစုသည် ၎င်းတို့၏ ပါဝါနှင့် အကြင်နာမဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းလိုသူများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဖြစ်တည်မှု။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၏ အရင်းခံဖြစ်သော ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြစ်ပါသည်- အာဏာမှဖယ်ရှားသည့်ကဏ္ဍများရှိနေချိန်တွင် အချင်းချင်း ရန်ဘက်ပြုရန်အလို့ငှာ လူစုကို ခြယ်လှယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၏ အရင်းခံဖြစ်သော ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြစ်ပါသည်- အာဏာမှဖယ်ရှားသည့်ကဏ္ဍများရှိနေချိန်တွင် အချင်းချင်း ရန်ဘက်ပြုရန်အလို့ငှာ လူစုကို ခြယ်လှယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ဗီတိုအာဏာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံသည်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိက လက်နက်ထုတ်လုပ်သူ ၅ နိုင်ငံ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုကြပါစို့။ လက်နက်တွေ စစ်ပွဲတွေ စစ်ပွဲတွေ က လက်နက်တွေ တောင်းဆိုတယ်...
တစ်ဖက်တွင်မူ စစ်ပွဲများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သမိုင်းမတင်မီအတိတ်၏ အကြွင်းအကျန်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မျိုးစိတ်များအတွက် ကြီးလေးသောအန္တရာယ်မဖြစ်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို "သဘာဝ" ဟု မှတ်ယူလုနီးပါးဖြင့် ယနေ့အချိန်အထိ ၎င်းတို့နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကြွပ်ကြွပ်တကောင်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ရာဂဏန်းသေဆုံးပါက လူသားမျိုးနွယ်အတွက် အဘယ်ပြဿနာရှိနိုင်မည်နည်း။ အဲဒီကနေ ထောင်ချီသွားတယ်။ ထို့နောက်တွင် သတ်ဖြတ်ခြင်းအနုပညာတွင် နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ အတိုင်းအတာသည် ဆက်လက်တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောကမ္ဘာစစ်များတွင် အသေအပျောက်စာရင်းဝင်သူ သန်းဆယ်နှင့်ချီရှိသည်။ နူကလီးယားလက်နက်များ၏ ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းသည် တနေ့တခြား တိုးမြင့်လာနေသည်။ ယခုအခါ၊ နျူကလီးယား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များသည် အန္တရာယ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်၏ အဆက်ပြတ်မှုသည် ယခုအခါ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။
ဒါကို ငါတို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ မျိုးစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချိုးအကွေ့တစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချင်းချင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းထက် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိရန် ပိုမို၍ စည်းလုံးညီညွတ်ရမည်ကို သိရှိကြောင်း ပြသနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့ နှစ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ စစ်ပွဲများသည် ရှေ့ခရီးလမ်းဟု ယုံကြည်သူ မည်သူကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ မတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အာမခံနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ခြောက်ဆယ်သည် နျူလက်နက် တားမြစ်ရေး သဘောတူစာချုပ် (NPT) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် နျူကလီယားလက်နက်များကို တားမြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါကို အတည်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရတွေကို တွန်းအားပေးကြပါစို့။ နျူကလီးယားလက်နက် ကာကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေကို ခွဲထုတ်ကြပါစို့။ နိုင်ငံများတွင် ပို၍ပို၍အားကောင်းသော လက်နက်များကို ပိုမိုတွေ့ရှိလာသောကြောင့် “ဟန့်တားခြင်း” ၏အယူဝါဒသည် မအောင်မြင်ပါ။ နျူကလီးယား ခြိမ်းခြောက်မှုကို မဖယ်ရှားသေးပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အင်အားပို၍တိုးလာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အလယ်အလတ်အဆင့်အနေဖြင့်၊ နိုင်ငံစုံဝါဒဆီသို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဦးတည်ချက်ထားပြီး လူသားမျိုးနွယ်၏ အဓိကပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရေးဆီသို့ ဦးတည်ချက်ဖြင့် ပြန်အမ်းငွေရှိသော ကုလသမဂ္ဂလက်ထဲ နျူကလီးယားလက်နက်များ ထားရှိကြပါစို့။ .
ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်စားပြုသော တိရစ္ဆာန်များကို သတိပြုမိစေရန်အတွက် ဤသဘောထားကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖော်ပြကြပါစို့- ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို နောက်ထပ် မတတ်နိုင်တော့ပါ။ စစ်ပွဲများသည် လူ့လောက၏ အမှိုက်များဖြစ်သည်။ အနာဂတ်သည် စစ်မရှိသည်ဖြစ်စေ လုံးဝမဖြစ်စေရ။
မျိုးဆက်သစ်တွေက ငါတို့ကို ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။
ရာဖေးလ် de la ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့. စပိန်လူသားဝါဒီ။ စစ်ပွဲများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကင်းသောကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်သူနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းမဖက်ရေးကမ္ဘာ့ချီတက်ပွဲ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ theworldmarch.org
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ (ယူကရိန်း) ခေါင်းဆောင်များအားလုံးသို့ သဝဏ်လွှာ
အိန္ဒိယတွင်ကျင်းပခဲ့သော“ ဟီရိုရှီးမားမဟုတ်တော့ Nagasaki မရှိတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပြပွဲ”
သြဂုတ်လ 27, 2018 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
“ ဟီရိုရှီးမားမရှိတော့ပါ၊ Nagasaki မရှိတော့ပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပြတိုက်” နှင့် Raman သိပ္ပံစင်တာတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ“ ဟီရိုရှီးမားမဟုတ်တော့ပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပြပွဲ” ကို Raman Science Center နှင့် Planetoarius၊ ယဉ်ကျေးမှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ အိန္ဒိယ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
နောက်ပြန်လှည့်မသွားခြင်း - နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုအတွက်အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။
မေလ 30, 2020 CV 0
နျူကလီးယားလက်နက်များပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သူတို့၏ဖျက်သိမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်တိုးတက်မှုမှန်သမျှသည်နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှပညာပေးသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်မိသောအသစ်စက်စက်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိလိုပါကဖျက်သိမ်းခြင်း 2000 မှထုတ်ပြန်ချက်ကိုလေးနက်စွာချက်ချင်းဂရုပြုရမည်။
[ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2019 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
နို ၀ င်ဘာလ ၂၁-၂၃ တွင်ယူကရိန်းရှိပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော“ ကောင်းမွန်သောအိမ်နီးချင်းကောင်းမှုယဉ်ကျေးမှု” သင်တန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကိုယူကရိန်းပညာရေးနှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုတေသနအတွက် NGO ပေါင်းစည်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာတို့ ပူးပေါင်း၍ စီစဉ်ခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဧပြီလ 16, 2022 မှာ 7: 36 နံနက်
ဘာသာတရားအားလုံးတွင် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေသူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းသောနေ့ ဖတ်ရှုခြင်း- ဤသည်မှာ ငါ့မျှော်လင့်ချက်၊ ငါ့ဆန္ဒ၊ ငါ့အိပ်မက် ငါ့တာဝန်၊ ငါ့အလုပ်၊ ငါ့ပန်းတိုင်၊ ယခုနှင့် ငါ့ဘဝတစ်သက်တာလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ အတူတူဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက် ဤသန့်ရှင်းသောစနေနေ့ကိုဖတ်ရှုပြီး နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရန် တွန်းအားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။